Igumbi elinye lokulala kwiNkosana yasemaphandleni eneTubhu eshushu
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguTracy
Yenza kube lula kolu hambo lukhethekileyo kunye noluzolileyo kunye neetoni zomlinganiswa eziyimfihlo ngokupheleleyo kuwe kuphela ngexesha lokuhlala kwakho. Inayo yonke into ekumnyango wakho ukusuka kwii-pubs ezinobuhlobo zasekhaya kunye ne-grub enkulu ukuya kwi-Lough Durg emangalisayo kwaye lunxweme lokufika ukuze ukonwabele. Ikwasisiseko esihle sokuhlola indlela yasendle yeAtlantiki kunye needolophu ezigqwesileyo zaseGalway, eLimerick, eBirr nase-Ennis, singasathethi ke ngekhaya elinobuhlobo nesilwanyana esineHottub entle yokuphumla kwaye uphumle. ❤️
Indlu yemveli enayo yonke into efunekayo ukukunika indawo yokuhlala epholileyo kwindawo entle yase-East Clare. Kukho iitoni zomlinganiswa wehlabathi wakudala ukanti i-fiber broadband ekhawulezayo kwabo bafuna ukuhlala beqhagamshelwe, okanye ubusuku obupholileyo ekubukeleni iNetflix ngomlilo ovulekileyo. I-cottage idityaniswe kwipropathi enkulu engenanto kodwa ungasebenzisa iipatios, ibhafu eshushu, kunye nendawo yokupaka eyaneleyo kunye nendawo yangaphandle.
4.76 ·Izimvo eziyi-17
Kwindawo ekufutshane ye-cottage kukho ukuhamba okukhulu kunye nemikhondo. Kukwakho neziko lokukhwela iequestrian imizuzu emihlanu ukusuka kwipropathi, kunye nelough entle iDurg edume ngokuloba kunye neelali zayo ezintle zeLake Shore kunye neendawo zokuqhuba ezintle.
Sifumaneka ngalo lonke ixesha ngefowuni kwaye ixesha elininzi kwaye sibe nawe phakathi kweyure ukuba siyafuneka.